Eddy Cue anoenda kuIndia kunovhura iyo nyowani Mac Lab | Ndinobva mac
Javier Porcar | | Apple Music, dzakawanda
Apple Music inoda kuve inopfuura yekushambadzira sevhisi. Kune akawanda masevhisi ekushandisa, anotungamirwa pasirese neSpotify. Asi kana Apple ichida chimwe chinhu iri kugadzirisa masevhisi ayo. Zvishoma nezvishoma zvinozivikanwa zvakagadzirwa nekambani yeapuro senge rutsigiro kana mubatsiri kuApple yekushambadzira mimhanzi sevhisi. Pane ino chiitiko, tiri kutaura nezve chibvumirano pakati peApple Music neiyo KM Mumhanzi Conservatory (KMMC) kubva kuIndia, kusimudzira kuburikidza nemarabhoritari, kugadzirwa kwemimhanzi pamwe neLogic Pro X application, munzvimbo dzinozivikanwa seMac Lab.
Nzvimbo dzakasarudzwa pamwe ndedze: Chennai uye iyo Campus iri kuvakwa muMumbai. MuMusasa uyu, vadzidzi vachadzidziswa kugadzira mimhanzi pamwe neApple application inozivikanwa, Logic Pro X. Mharidzo yechibvumirano ichi yaive sachigaro nenhengo yakasarudzika: iye Eddy cue, Mutevedzeri Mukuru weInternet Software neMabasa. Apple inowanzo kuunza hunhu kuratidza irwo rudzi rwechiitiko. Pane ino chiitiko yakave nekuvapo kwe AR Rahman. Iye hunhu chaihwo muIndia, uyezve kunze kwekuve munyori, mugadziri, muimbi, ndiye zvakare muvambi weKMMC.
Panguva yechiitiko ichi, Eddy Cue akatora mukana wekuzivisa kugadzirwa kwe10 yakazara-yenguva masomo yevadzidzi vasina hupfumi, muchirongwa chavachaita pamwe ne KM Mimhanzi yekuchengetedza.
Iropafadzo kuve muMumbai uye ndinozvininipisa ndinotenda kuve pamberi pevane tarenda AR Rahman kuti ndiite chiziviso ichi pamwe chete.
Eddy Cue, akabvumawo panguva yehurukuro:
Apple Music neKM Music Conservatory vanogovana rudo rwakadzama rwekutsvaga, kugovana nekusimudzira tarenda remimhanzi, uye tinodada nekutsigira inisitimendi inodyara mune ramangwana hunyanzvi nemumhanzi munharaunda.
Ukuwo, AR Rahman, akaratidzawo kutenda kuna Apple.
Mimhanzi murapi wenyika yanhasi uye tinogovana kubatana uye rudo rwemimhanzi seApple Music. Iwo marabhosi uye masomo eKMMC anoita mupiro unokosha mukubatsira kusimudzira matarenda evaimbi vemangwana nevanyori. Kwemakore makumi maviri apfuura, ndanga ndiri mushandisi akavimbika weLogic Pro uye ndinofara kuve parwendo urwu takabatana naApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Eddy Cue anoenda kuIndia kunovhura Mac Lab nyowani